बालबालिकाको आँखामा आउने समस्या र बच्ने उपाय
२०७७ पुष २३ बिहिबार
- डा. सुजता भण्डारी
काठमाडौं - आँखा मानव शरीरको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र संवेदनशिल अंग हो। आँखामा विभिन्न किसीमका समस्याहरु आउने गर्छन् । नेपालमा पछिल्लो समय धेरैजसो बालबालिका आँखा समस्याको शिकार भएका छन् । केहि बालबालिकामा जन्मजात रुपमा नै आँखामा समस्याहरु देखिने गर्छन् । भने केहि बालबालिकाहरुमा जन्मिएको केहि समयपछि यस्ता समस्याहरु देखिन सुरु हुन्छन् ।
बालबालिकामा देखिने आँखा सम्बन्धि केहि समस्याहरु यस्ता छन्ः
बालबालिकामा धेरैजसो दृष्टि दोषको समस्या देखिने गर्छ । यस्तो समस्या भएका बालबालिकाको आँखा कमजोर हुने गर्छ। यो समयमा समस्याको पहिचान गरि बिज्ञको सल्लाह अनुरुप चस्मा लगाएमा सुधार हुदै जान्छ ।
आँखा पाक्ने रोग जुनसुकै उमेर समुहरुका व्यक्रिमा पनि हुन सक्छ । तर विशेषगरी बालबालिकामा बढी देखिने गरेको पाइन्छ । आँखा पाक्दा गुलाबिवा रातो हुने गर्छ । आँखा पाक्दा चिलाउने, पोल्ने र बिस्तारै एउटा आँखाबाट शुरु भएर दवै आँखा पाक्ने हुन सक्छ । पाकेको आखाँबाट बाक्लो पिप बग्नाले आँखाको ढकनी रातभरमा टाँसिन सक्छ ।
आँखा पाक्ने समस्या भाइरसले गर्दा हुन्छ । यो समस्या कुनै बिशेष उपचार बिना केही दिनमा आफै हराएर जान पनि सक्छ । ।
यदि ब्याक्टेरियाको कारणले आँखा पाक्ने समस्या भएको छ भने बाक्लो पहेंलो वा सेतो तरल पदार्थ बग्छ । यस्तो अवस्थामा विशेषज्ञको सल्लाह अनुसार आँखाको एण्टिवायोटिक मलम वा थोपा औषधीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
एउटा आँखाबाट अर्को आँखामा संक्रमण सर्न नदिन वा उपचारमा संलग्न लगायत अन्य व्यक्तिलाई सर्न नदिन आँखा सफा गर्दा, उपचार गर्दा हात धुने गर्नुपर्छ ।
हावामा रहेको धुलो, पराग वा अन्य कणहरुले हाछ्युँ आउनुका साथै आँखा रातो हुने, चिलाउने र रसिलो हुने समस्या देखिन सक्छन् । त्यसलाई एलर्जी भनिन्छ । कुनै निश्चित समयमा मात्र रुख र वनस्पतिहरुबाट निश्काशित परागले पनि एलर्जी बनाउन सक्छ ।
कुनै पनि एलर्जीबाट बच्ने मुख्य उपाय भनेको एलर्जी हुने कारणबाट टाढा बस्नु हो ।
चिलाउने आँखालाई चिसो दोब्य्राइएको कपडा आँखामाथि लगाएर शितलता दिनु पर्छ ।
धेरैजसो बालबालिकाको आँखा अल्छि हुने समस्या पनि देखिन्छ । आँखा अल्छि भएमा दुष्टि पनि कम हुने गर्छ । यस्तो समस्या भएमा पनि चस्मा लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
जन्मजात जलबिन्दु र मोतियाबिन्दु
जन्मजात जलबिन्दु प्रायः कमै बालबालिकामा मात्र देखिने गर्छ ।
परिवारको कुनै सदस्यमा मोतियाबिन्दु भएमा शिशुमा पनि हुने सम्भाबना रहन्छ । त्यस्तै गर्भावस्थामा आमालाई कुनै इन्फेक्सन भए पनि यो समस्या देखिन सक्छ । साथै गर्भावस्थामा कुनै औषधि सेवन गरेमा पनि यो समस्या देखिने गर्छ ।
गर्भावस्थामा मधुमेह देखिएमा पनि शिशुको आँखा कमजोर हुने सम्भावना बढि हुन्छ । भने कहिले काहि बिना कारण पनि यस्ता समस्या देखिन सक्छन् ।
आँखा डेरो हुने
हाम्रो समाजमा अझै पनि आँखा डेरो हुनुलाई स्वास्थ्य समस्या नभई भाग्यमानीको संकेत दिइन्छ । कोहि व्यक्तिको जन्मजात आँखा डेरो भएको हुन्छ । भने केहिमा जन्मेको केहि महिनादेखि १ बर्ष भित्रमा आँखा डेरो भएको हुनसक्छ । आँखा कमजोर हुनु र आँखा डेरो हुनु एक अर्कासँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले आँखा डेरो भएको बालबालिकाको आँखा कमजोर हुने वा आँखा कमजोर भएर डेरो हुने दुवै हुन सक्छ ।
दुष्टि कम भएमा चस्मा लगाएर, एक्साइज गरेर सुधार्न सकिन्छ । शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थामा शल्यक्रिया गरेर दुष्टि जोगाउन सकिन्छ । यदि बयस्क हुदाँसम्म आँखामा चस्माले दुष्टि सुधार नआई आँखा कमजोर भइरहेमा चस्मा नलगाउन सुझाव दिइन्छ । किनकि यस्तो अवस्थामा चस्माले काम गरिरहेको हुदैँन ।
(डा. भण्डारी हाल नेपाल आँखा अस्पतालमा पेडाट्रिसियन अन्कोलोजिस्टको रुपमा कार्यरत छिन्)